Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka ayaa tababar u furay Garsoorayaal iyo Tababarayaaal ka socda Dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada,+(SAWIRRO) (MUUQAAL). | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka ayaa tababar u furay Garsoorayaal iyo Tababarayaaal...
Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka ayaa tababar u furay Garsoorayaal iyo Tababarayaaal ka socda Dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada,+(SAWIRRO) (MUUQAAL).
Tababarkan oo wajigiisa saddexaad la siinayo Macalimiinta Garsoorka Dalka ayaa waxaa ka qayb galaya Garsoorayaal heer Federaal heer, Dowlad Goboleed iyo kale Xeer ilaaliyeyaal ka kala yimid dhammaan Dowlad Goboleedyadda iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya waaxana Furay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dalka Mudane Baashe Yuusuf Axmed.
Tababarkaan oo muddo 10 maalin ah socon doono ayaa waxaa lagu baranaya casharo ku saabsan hanaanka dhageysiga dacwadda Maxkamaddaha, Qaadida Qiraalka iyo maamulka waxaa bixinaayey Macalimiin ku sugan Dalka Dibaddiisa iyaddo la adeegsanaayey Aaladda Fogaan Arragga ah.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dalka mudane Baashe Yuusuf Ahmed oo tababarka Furay ayaa sheegay in ujeedka tababarkaani uu yahay siddii loo horumarin lahaa Garsoorka Dalka iyaddoo la gaarsiinayo heer isku filnaansho ah.
Garyaqaan Baashe Yuusuf Ahmed Guddoomiyaha Maxkmadda Sare ee Dalka ayaa kula dardaarmay Garsoorayaashii tababarka ka qaybgaliyey inay ka faa’idaystaan casharadda si ay ugu mid noqdaan macalimiinta Garsoorka Dalka.
Muuqaalka Warkan Halkan ka DAAWO.
Previous articleTaliyaha Booliiska Soomaaliya oo Garoowe kula kulmay Madaxwayne ku-xigeenka Puntland.
Next articleRa’iisul Wasaare ku xigeenka dalka oo dhagax dhigey dib-u-dhiska dhisamaha Wasaaradaha Cadaaladda iyo Diinta,+SAWIRO+MUUQAAL.